Забур 62 CARS - Nnwom 62 AKCB
1Me kra wɔ ahomegye wɔ Onyankopɔn nko ara mu;
me nkwagye fi ne nkyɛn.
2Ampa, ɔyɛ me botan ne me nkwagye;
ɔyɛ mʼabandennen, hwee renhinhim me da.
3Mobɛkɔ so ahyɛ onipa so akosi da bɛn,
mo nyinaa besum me ahwe fam ana?
Ɔfasu a akyea yi, ban a ɛrebu yi?
4Ampa, wɔayɛ adwene se wobetu no
afi ne dibea a ɛkorɔn no so;
wɔn ani gye atorodi ho.
na wɔn koma mu de, wɔdome.
5Yiw me kra, gye wʼahome wɔ Onyankopɔn nko ara mu;
na ne mu na mʼanidaso wɔ.
6Ampa, ɔyɛ me botan ne me nkwagye;
ɔyɛ mʼabandennen, hwee renhinhim me.
7Me nkwagye ne mʼanuonyam gyina Onyankopɔn so;
ɔyɛ me botan a ɛkorɔn, ne me guankɔbea.
8Mo nnipa, momfa mo ho nto ne so daa;
monka mo koma mu nsɛm nyinaa nkyerɛ no,
efisɛ Onyankopɔn ne yɛn guankɔbea.
akɛse ne nkumaa nyinaa nka hwee;
wɔn nyinaa bɔ mu a wɔyɛ home nko.
10Mommfa mo ho nto asisi so
na monnhoahoa mo ho akorɔnne ho;
ɛwɔ mu sɛ mo ahonya dɔɔso de,
nanso mommfa mo koma nto so.
nsɛm abien na mate sɛ,
wo, Onyankopɔn, na wowɔ ahoɔden,
12na wo, Awurade, na woyɛ adɔe,
ampa ara wubetua obiara ka
sɛnea nʼadwuma te.
AKCB : Nnwom 62